Fantatro fa mila fahazavana i Mandritsara. Izany no antony ahantongavako aty dia hitondra hazavana ho anareo sy isan-tokantrano. Tsy mendrika anareo intsony ny hiaina anaty haizina. Hametraka orinasa manamboatra fitaovana amin’ny herin’ny masoandro aho isakin’ny faritra. Vao lany Filoham-pirenena ihany koa aho dia ampiakariko 100% ny karaman’ny sefo fokontany.
ISIKA TSY MAINTSY MANDRESY.